Gadashada - Howling Pixel
Gadashada wexey tahay markaad qof wax siisid oo qiimo misa tayo leh, siidha lacag la mid ah, oo aad ku bedeshid wax kale. Af ingiriis waxaa lugu yiraahda buying, misaa purchasing. Badnaanta, gadashada wexey ka dacda dukaamada. Laakin qarnigii labaatan iyo kow, waxaa la bilaabey iin gadashada aad lugu tijaabo internetka.
Barack Xuseen Obama (US /ˈrɑːk huːˈseɪn oʊˈbɑːmə/;; Af-Ingiriis: Barack Husein Obama; Af-Carabi: باراك أوباما; wuxuu dhashay Ogosto 4, 1961) waa siyaasi isla markaana aha madaxweynihii 44 ee dalka Mareykanka , iyo qofkii ugu horreeyey ee Afrikan Ameerikan ah ee xilkaas qabta wuxuu ku dhashay Honolulu jasiiradaha Hawaii. Obama wuxuu ka qalin jabiyey jaamacadda Columbia University iyo dugsiga garsoorka jaamacadda harvard Harvard Law School, halkaasuu kasoo noqday madaxa Harvard Law Review.
Barack Obama waa nin dhalinyar ah oo aad u xargo badan ahna madaxweyna USA dadiisuna waa 47 jir. Waxa uu ku dhashay gobolka Hawaii bishii Juli 27 teedii, Sanadkii 1961 dii. waxaa iska dhalay Aabe dadka madow ah oo ka yimid wadaka Kenya iyo hooyo dadka cadaanka ah oo ka soo jeeda Gobolka Kansas ee wadanka Maraykanka
Isaga iyo Afadiisa Michelle Obama, waxa ay leeyihiin laba gabdhood oo la kala yiraahdo Malia iyo Sasha
Aabbihii waxa uu ka tagay isaga oo laba sano jir ah si uu waxbarashadiisa uga sii wato jaamacada Harvard. Kaddibna waxa uu dib ugu laabtay dhulkii uu ka yimid ee Kenya.
Aabbiihiis kadib, Senator Obama hooyadii waxa ay guursatay nin ka yimid waddanka Indonesia. kadibna waxay u guureen wadankaasi oo ay ku noolayeen intii u dhaxaysay sanadihii 1969 kii ilaa 1971dii.
Obama, markii uu dib ugu soo laabtay gobolka Hawaii ee ay hooyadii ku noqotay Indanusia, waxa uu halkaasi kula noolaa waalidiintii hooyadii dhashay ee cadaanka ahaa.
Beeso (Af-Ingiriis: Money) waa shey ka samaysan bir, shilinka, iyo warqad leh astaamo iyo calaamado kala duwan taas oo dadku isla garteen in wax lagu kala iibsado. Beesadu waa shey miisaan yar oo lagu qiimeeyo qadarka alaab, badeecad, guri, dhul iyo waxyaabo kale leeyihiin.
Shilin (Af-Ingiriis: Coin) waa jaandi wareegsan kaas oo ka samaysan bir, dahab, iyo naxaas leh astaamo iyo calaamado kala duwan taas oo dadku isla garteen in wax lagu kala iibsado. Shilinka lacagtu waa shey miisaan yar oo lagu qiimeeyo qadarka alaab, badeecad, guri, dhul iyo waxyaabo kale leeyihiin.
Hadaba dunida maanta waxaa jira tiro badan oo lacag ah, wadan kasta wuxuu leeyahay lacag u gaar ah, taasi oo qiimaheedu kala sareeyo isla markaana ka sameeysan shilimaan iyo warqado.
Guud ahaan lacagtu waa labo nooc: mid shilin ah iyo mid warqad ka sameeysan. Shilimaantu waa qadarka ugu qiimaha hooseeya lacagta wadan leeyahay, inta badana waxa ka soo bilaabmaan hal senti, shan senti, toban senti, konton senti iyo boqol senti.
Soosaaridda (ingiriis manufacturing) wa samaynta iyo abuurida alaabta iyo maceeshada ka soo baxay dabiiciga. Soosaaridda waxay ku lug leedahay
marmar shaqaalahu dad ah, iyo marmar mashiinka korontada.